Indlela yokuhlukanisa uma kukhona ingane kanye nemali yokuboleka imali? Ukuhlukanisa umyeni wakhe, umfazi ngaphandle kwemvume, uma kukhona ingane?
Ngeshwa, akuyona yonke imibhangqwana eshadile ehamba ngayo yonke impilo yayo isesandleni. Abaningi babo ekugcineni bayaqaphela ukuthi abadalwanga omunye nomunye futhi bavakashela isahlukaniso. Le nqubo engalungile ivame ukulukhuni nezinye izici eziningi: ukutholakala kwezingane, ingcebo, izimali zokuthenga, njll. Namuhla uzofunda ukuhlukanisa uma kukhona ingane noma imali yokubolekwa kwempahla.
Indlela yokuhlukanisa uma kukhona imali yokuboleka imali?
Ngokomthetho weRussia Federation, impahla ezuzwa abashadile yindawo ejwayelekile. Uma kunesahlukaniso, impahla kufanele ihlukaniswe ngesigamu, ngokungabikho kwanoma yiziphi ezinye izimo emkhakheni womshado. Kodwa-ke, izindlu ezithengiswayo ezithengwa emalini yokubolekwa imali ngeke zibhekwe njengezinto zomuntu womshado kuze kube yilapho isikweletu sikhokhelwa ngokugcwele ebhange. Umsebenzi ukucacisa ukuthi ubani ozokhokha imali yokubolekwa kwempahla nokuthi kanjani.
Ngokwesivumelwano esenziwe ebhange, abashadile ababolekayo baphoqelekile ukuba babike ngalezi zinguquko ezibalulekile: ushintsho lomsebenzi, ukuthutha, isimo somshado, njll. Kumele uqaphele ukuthi akunakwenzeka ukuthi ibhange lizovuma ukuhlukanisa isikweletu phakathi kwalabo abashadile bese likhokha njengababazi ababili.
Indlela engcono kakhulu yokukhokhwa kwesikweletu se-real estate. Ngemuva kokukhokha, indlu noma indlu ingathengiswa futhi ihlukaniswe ngemali. Uma lolu khetho lungalungile, mhlawumbe ibhange lizovumela ukuveza isikhala esiphilayo. Emva kokuthengiselana, imali kufanele ihlukaniswe ngesigamu. Ngokuvamile, amabhange avumela iziphakamiso ezinjalo.
Ukungafani kokubhalisa kabusha kwemali yokubolekwa komunye umlingani kungenzeka, uma inani lemali engenayo yenyanga livumela. Ukukhokha okuqhubekayo kwenziwa ngendlela evamile. Ngesikhathi esifanayo, umlingani wesibili unamalungelo okuhlala, kungakhathaliseki ukuthi awusayikhokheli. Yiqiniso, uma uhlukanisa izimo ezinjalo azivumelani neze.
Ngokomthetho, uma kukhona izingane emshadweni, khona-ke ukwahlukanisa ehhovisi lokubhalisa akusebenzi, kufanele uqale. Uma abashadile bevumelana ngokuthula ukuthi ngubani ozohlala naye, kuyadingeka ukuthi ufake isicelo esitatimendeni kumantshi endaweni yokuhlala. Uma kungavumelani, ngokuphathelene nesahlukaniso, bathunyelwa enkantolo yendawo yokuphatha.
Ngokufanayo, ngenqubo yokushada, isehlukaniso sinikeza inkantolo ngenyanga ukucabanga, emva kwalokho umhlangano ukhethwe.
Uma abashadile bexazulula ngokuthula izindaba zomndeni eziphathelene nomhlaba nengane, khona-ke esimisweni sokuqala senkantolo umshado uqedwa ngaphandle kwezinkinga.
Uma abashadile bengenakufinyelela ekuvumelaneni okujwayelekile mayelana nengane, inkantolo yesifunda izothatha isinqumo ngokwayo. Isinqumo sabahluleli sincike emaphuzu amaningi: isimo sengqondo sabashadile, izimo zomntwana, impilo yomzimba nengqondo yomzali, isifiso somntwana sokuhlala noyise noma umama, njll. Ngaphezu kwalokho, kudingekile ukusetha okufana nalokhu:
inani kanye nokuhleleka kokukhokhwa kwe-alimony;
ithuba lokubona ingane;
ubude nemvamisa yokuvakashelwa nengane esikhathini esizayo.
Abantu abaningi banesithakazelo kulowo mbuzo - indlela yokuhlukanisa uma kukhona ingane kuze kube yonyaka ubudala? Uma umkakho ukhulelwe noma ingane ingenangonyaka owodwa ubudala, lowo oshade naye akanelungelo lokufakela isehlukaniso ngaphandle kwemvume yakhe. Ukumangalelwa ngeke kwaneliseke ngisho noma ingane ifa ngonyaka wokuqala.
Lo mthetho wamukelwa ukuvikela abesifazane emibonweni mayelana nehlukaniso esikhathini esibucayi. Uma oshade naye engavumelani nokuhlukanisa, isicelo asikwazi ukucatshangwa kunoma yimuphi umzimba.
Sithemba ukuthi isihloko sethu sikusize ukuba uqonde ukuthi ungahlukanisa kanjani uma kukhona ingane kanye nemali yokuboleka imali.
Kunoma yikuphi, ngaphambi kokuhlukaniswa, cabanga isimo somzwelo wengane. Zama ukumvikela ekucindezelekeni ngenxa yesimo esinzima phakathi kwabazali.
Uma indoda ifuna ukushiya ... Bamba noma uvumele ukuhamba?
Ukuqeda umshado phakathi kwabashade
Kuthiwani uma kunzima ukuhlukanisa nomyeni wakho?
Ukuhlukanisa: ukuwa noma ukuzalwa kabusha?
Kulula kangakanani ukushiya insizwa?
Kulula kangakanani ukusinda isahlukaniso
Amabele amancane: ukungalungi nezinzuzo
Isaladi ngamabele namakhowe
Indlela yokunciphisa ubuhlungu bomsebenzi ngesikhathi sokubeletha?
I-Barberry nezakhiwo zayo eziwusizo
I-whisky ehlutshiwe emantombazaneni: ukuthambekela kokugcina noma ukungcolisa ngokweqile?
Indlela yokuqonda ukuthi sekuyisikhathi sokuhlukanisa nomfana?
Imenyu yesikhumba ehlanzekile nebushelelezi: izeluleko zezingane eziyisi-4
U-Timati noGregory Leps babengavunyelwe ukuya eLondon ngenxa yesoseji
Isobho semifino ene-shrimps
Umyeni usakhulile izingane: kanjani ukuziphatha?
Ungaba kanjani i-akhawunti yenhloko enhle?
Ukuphulukisa impahla yetiyi omnyama
Ummbila wesikhumba kuhhavini ye-microwave
Izifo zesifuba kubesifazane, izimpawu